၎င်း၏မျက်နှာပြင်၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကိုရေဖုံးလွှမ်းနေသောကမ္ဘာဂြိုဟ်တစ်လုံးသည်သမုဒ္ဒရာများမှအပူပိုင်းဒေသအထိကမ္ဘာတစ်ခုလုံး၏ရာသီဥတုကိုထိန်းညှိရာတွင်အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ပစိဖိတ်အရှေ့ပိုင်းအပူပိုင်းဒေသတွင်တည်ရှိပြီးရာသီဥတုအခြေအနေကိုဒေသအလိုက်ဖြစ်ခြင်းဖြင့်စတင်သည်၊ သို့သော်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး၏အကျိုးဆက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ နီညို.
ဤဆောင်းပါး၌ရှင်းပြပါမည် ဒါကဘာလဲ၊ ဘယ်လိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရာသီဥတုကိုထိခိုက်သလဲ ဒါကြောင့်ငါတို့သမုဒ္ဒရာနဲ့သူတို့ကမ္ဘာဂြိုဟ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းအားလုံးအပေါ်သူတို့လွှမ်းမိုးမှုအကြောင်းပိုလေ့လာနိုင်တယ်။
နီညို ၎င်းသည်အရှေ့ပိုင်းအီကွေတာရစ်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ၏ပူနွေးမှုနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ သုံးနှစ်သို့မဟုတ်ရှစ်နှစ်တိုင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်ပြီး ၈ လမှ ၁၀ လအထိကြာသည်။ ၎င်းသည်အီကွေတာပစိဖိတ်ရာသီဥတုအခြေအနေ၏နွေးထွေးသောအဆင့်ဖြစ်သည့်အဲနီညို - တောင်ပိုင်းလှို, ENSO ကို၎င်း၏အင်္ဂလိပ်အတိုကောက်အားဖြင့်ဖော်ပြသည်။ အဓိကအားဖြင့်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်အပူပိုင်းဒေသနှင့်အီကွေတာရပ်ဝန်းတွင်မရေမတွက်နိုင်သောကြီးမားသောပျက်စီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ပီရူးတံငါသည်များကထိုအမည်ကိုယေရှုကလေးကိုရည်ညွှန်းပြီးနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းခရစ္စမတ်တွင်နွေးထွေးသောရေစီးကြောင်းပေါ်လာသည်။ ၎င်းသည်ဒေသန္တရပီရူးဖြစ်ရပ်မဟုတ်ကြောင်းသတိပြုမိသည်မှာ ၁၉၆၀ ခုနှစ်ရောက်မှသာဖြစ်သည် အပူပိုင်းဒေသပစိဖိတ်တစ်လျှောက်လုံးနှင့်ဝေးလံသောဒေသများတွင်အကျိုးဆက်များရှိသည်.
ဤဖြစ်စဉ်သည်မည်သို့ဖြစ်ပေါ်လာသည်ကိုမရှင်းလင်းသေးသော်လည်းမိုးလေ ၀ သပညာရှင် Jacob Bjerknes (၁၈၉၇-၁၉၇၅) သည်သမုဒ္ဒရာမျက်နှာပြင်၏မြင့်မားသောအပူချိန်များကိုအရှေ့လေမှအားနည်းခြင်းနှင့်လိုက်ဖက်သည့်ပြင်းထန်သောမိုးများနှင့်ဆက်စပ်ထားသည်။
နောက်ပိုင်းတွင်အာဗြဟံ Levy အမည်ရှိအခြားမိုးလေ ၀ သပညာရှင်တစ် ဦး ကမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည် ဆောင်း ဦး ရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီတွင်အေးသောပင်လယ်ရေသည်အပူရှိန်ကြောင့်လေထုအပူချိန်တိုးလာသည်။ Australiaစတြေးလျမှပီရူးအထိရေပူစီးကြောင်းများသည်ပင်လယ်အောက်တွင်ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသည်။
၎င်းသည်အကျိုးဆက်များကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အချိန်မီ၎င်းကိုရှာဖွေနိုင်သောစနစ်များရှိရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ချေအများဆုံးသောသေဆုံးမှုအရေအတွက်ကိုရှောင်ရှားရန်သင့်လျော်သောဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ အဲဒါအတွက် ဂြိုဟ်တုများ၊ ရေပေါ်ဗော်ယာများကိုအသုံးပြုပြီးပင်လယ်ကိုဆန်းစစ်သည် အီကွေတာဇုန်ရှိပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်သည်မည်သည့်အခြေအနေများရှိသည်ကိုသိရှိရန်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်လေအားစုံစမ်းစစ်ဆေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းလေအပြောင်းအလဲသည်အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်နီးပြီဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
နှစ်ပေါင်းထောင်နှင့်ချီ။ ဖြစ်ပွားခဲ့သောဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည့်အဲလ်နီညိုသည်ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုအပေါ်များစွာသြဇာသက်ရောက်သည်။ အမှန်မှာ၊ ယနေ့၎င်းသည်itရိယာ၏ရာသီဥတုအခြေအနေကိုများစွာပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်လူ ဦး ရေတိုးပွားလာခြင်းကြောင့်ဘေးဒဏ်သင့်နိုင်ငံများသည်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုကိုင်တွယ်နိုင်ရန်အမှန်တကယ်ထိရောက်သောဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးမှုပြီးနောက် အပြောင်းအလဲများသည်အပူချိန်နှင့်မိုးနှင့်လေတို့ပုံစံများတွင်ဖြစ်ပွားသည် ကမ္ဘာဂြိုဟ်၌တည်၏။
တကမ္ဘာလုံးအပူချိန်မှတ်တမ်းများ၊ လေထုလည်ပတ်မှုပြောင်းလဲခြင်း၊ ဖယ်ရှားရန်ခက်ခဲသည့် (ဥပမာဝမ်းရောဂါ) ရောဂါ၊ အပင်နှင့်တိရိစ္ဆာန်များဆုံးရှုံးခြင်း။
တောင်အမေရိက၌: လေထုဖိအားလျော့နည်းခြင်း, Humboldt လက်ရှိအပူနှင့်မိုးရေချိန်အလွန်ပြင်းထန်သောကာလအတွင်းအလွန်စိုထိုင်းသောကာလ။
သို့သော်မှတ်သားရန်အရေးကြီးသည် အယ်နီညိုနှစ်လုံးမတူကြပါ။ ဆိုလိုသည်မှာပြီးခဲ့သည့်အချိန်ကထိခိုက်ခဲ့သည့်ဒေသများကိုနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံထိခိုက်မည်မဟုတ်ဟုဆိုလိုသည်။ သူတို့မှာဖြစ်နိုင်ခြေပိုမြင့်နိုင်ပေမယ့်သင်သေချာမသိပါဘူး
ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းသည်အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်အပေါ်မည်သို့သက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုအတိအကျမသိရသေးသော်လည်းသိပ္ပံပညာရှင်အတော်များများက၎င်းအားလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည် လေ့လာ ကမ္ဘာဂြိုလ်၏ပျမ်းမျှအပူချိန်မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှဖြစ်စဉ်၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်၎င်း၏ပြင်းထန်မှုများမြင့်တက်ဖွယ်ရှိသည်ဟု ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်သဘာဝဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာအစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့ (IPCC) ကဤချိတ်ဆက်မှုကိုသက်သေပြသည်ဟုမယူမှတ်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်နည်း။
ကောင်းပြီအဖြေမှာ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းအကြောင်းပြောသောအခါအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်သည်သဘာဝပြောင်းလဲနိုင်သည်။ သို့သော်နွေးထွေးသောကမ္ဘာတွင်အယ်နီညို၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အကြိမ်ရေများပြားလာလိမ့်မည်ဟုလေ့လာမှုကိုသဘောတူကြသည့် Jorge Carrasco ကဲ့သို့သောအခြားမိုးလေ ၀ သပညာရှင်များလည်းရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ခဲ့ရသည့်အတိုင်းအယ်နီညိုသည်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်အရေးကြီးသောအကျိုးဆက်များစွာဖြစ်စေနိုင်သောဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံမှုအတွက်အပူချိန်ဆက်လက်မြင့်တက်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကိုလျှော့ချရန်အရေးကြီးသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအပြင်၊ ပိုမိုပြင်းထန်သောအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်မှမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်လိုအပ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေ ၀ သဖြစ်ရပ်များ » အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ကဘာလဲ။